Sawirro: Kumanaan Qof Shiico Ah Oo Laga Saaray Magaalooyin Dhaca Waqooyiga Suuriya.
Thursday July 19, 2018 - 13:29:58 in Wararka by Super Admin
Waxaa soo gaba gaboobay howlgalkii dadka shiicada ah loogasoo daad gureynayay laba magaalo oo katirsan gobolka Idlib ee waqooyiga Wadanka Suuriya.
Wariyaal ku sugan degmooyinka Kafriya iyo Alfoocah ayaa xaqiijiyay in dhammaan dadkii deganaa labada magaalo iyo maleeshiyaadkii shiicada ahaa laga saaray guryahooda waxaana loo daad gureeyay dhanka gobolka Xalab ee isla waqooyiga Suuriya halkaas oo ay gacan ku hayaan ciidamada Bishaar Al-asad.
121 gaadiid Basas ah ayaa saaka aroortii hore daad gureeyay 6900 oo isugu jiray ciidamo Iiraaniyiin ah iyo ehelladooda oo dhammaantood shiica ah kuwaas oo muddo ka badan sedax sanadood ku go'doonsanaa deegaanno katirsan gobolka Idlib.
Tallaabadan ayaa timid kadib heshiis dhaxmaray kooxaha mucaaradka Suuriya iyo dowladda iiraan oo dhigayay in dadka shiicada iyagoo nabad qabo ka guuraan Kafriya Alfooca taas bedelkeedna xabsiyada maamulka Bishaar Al-asad lagasii dayn doono 1500 oo maxaabiis sunniyiin ah iyo ugu yaraan 40 sarkaal oo katirsan saraakiisha mucaaradka.
Falanqeeyayaasha waxay sheegayaan in baneynta labadan deegaan ay dhammeystir u tahay waxa loogu yeero Heshiiska afarta magaalo ee Suuriya halkaas oo uu ka dhacay isbedel dimuquraafi ah.